Ilhaan Cumar Oo si Adag U Cambaareysay Burburinta Israel ka Bilowday Dhulka Falastiin – Heemaal News Network
Ilhaan Cumar Oo si Adag U Cambaareysay Burburinta Israel ka Bilowday Dhulka Falastiin
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo ka tirsan Xildhibaanada Congresska Maraykanka ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ku cambaaraysay tilaabooyinka burburinta ah ee Yahuudu ka wado dhulka ay xoogga ku haysato ee Falastiin.
Ilhaan Cumar waxay sheegay in Yuhuudu ku xadgudbayaan xeerka caalamiga ah iyagoo si gardarro cad ah u burburinaya guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala Falastiin gaar ahaan daanta Galbeed.
Madaxda dawlada Maraykanka ayay sheegtay in looga baahan yahay inay isha ku hayaan xad gudubka ka socda dhulka Falastiin oo ay joojiyaan taageerada ay Yahuuda siiyaan.
“Waxa socda waa xad gudub weyn oo dambi ah haddii Maraykanku ka aamiso waxay la mid noqoneysaa iney ka qeyb qaadaneyso dambiyada caalamiga ah ee la galayo.” ayay ku tiri qoraalkeeda Xildhibaan Ilhaan Cumar.
Ilhaan waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay aad uga xumaatay tilaabadii ugu dambeysay ee ciidamada Yahuudu ku burburiyeen dhismayaal dad rayid Falastiiniyiin ah ku lahaayeen degaanka Xamsa Al-Baqiya oo daanta galbeed ku yaala, dhacdadaasoo hoy la’aan dhigtay 80 qoys oo Falastiiniyiin ah.
Meydka Qof Ajnabi ah Oo Laga Helay Xeebaha Puntland.
Somaliland Oo Qirtay In Denbiyada Kufsiga loo Xirin Raga Dhaqaalaha Leh
Dirawalada Gaadiidka Tagaasida Oo Mudaharaad ka Dhigay Garoowe.(Sawiro)
Heemaall November 17, 2020